IPerch Villa Orchard Artisan Homestay Homestay Shantiniketan - I-Airbnb
IPerch Villa Orchard Artisan Homestay Homestay Shantiniketan
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMahua
Indlu entle enendawo yokuphola enemigangatho emibini ephakathi kwegadi kunye negadi yasekhitshini eneentyatyambo apho sikhulisa khona iziqhamo nemifuno unyaka wonke. Zingqonge ngezinto eziluhlaza neentyatyambo ezininzi kwindlu eyilwe ngokucokisekileyo ngabazobi ngothando lwabo.
Yonwabela imbali yenkcubeko etyebileyo yaseShantiniketan, iBolpur kunye neSonajhuri Forest, iKopai River neVisva Bharati University zonke ezikumgama wemizuzu eyi-10. Esona sikhululo sikaloliwe sikufutshane yiPrantik, ikwayimizuzu eyi-10.
Le ndlu inamagumbi okulala ayi-2 AC kumgangatho wokuqala. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu negumbi lokuhlambela elidibeneyo. Igumbi lesibini lineebhedi ezimbini, ibhedi enkulu, kunye nebhedi enye. Umgangatho wokuqala uneendawo ezimbini zokuhlala eziqhelekileyo ezijonge igadi.
Umgangatho ongaphantsi yiholo enkulu enetafile yokutyela yezihlalo eziyi-6, idesika esebenzayo, kunye nendawo enkulu yokuhlala ene-Tata Sky kunye ne-Tata Sky. Kukho nebhedi elala abantu ababini enobude obuphantsi.
Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo ekhitshini kumgangatho we-mezzanine apho zinokulungiselela ukutya kwazo ukuba zikhetha ukwenza njalo. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwekhitshi kuyabhataliswa ngosuku ngalunye kwaye iindwendwe kulindeleke ukuba zizicoce, ukuba azifuni ukucoca, ukucoca okwenziwa ngumntu ococayo kuyabhatalelwa.
Kukho ityeya enkulu neebhalikhoni ezirawundi ezineendawo ezininzi ezivulekileyo zokuphumla nokuphola. Kukho iindawo ezininzi ezivulekileyo phambi kwendlu ukuze abantwana badlale.
Le ndlu inamagumbi ahlukileyo anendawo yokungena yeentombazana/umqhubi negumbi lokuhlambela elifakiweyo elifumaneka ngaphandle kokubhataliswa.
Isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa ziyafumaneka ngaphandle kokubhataliswa. Nceda uzive ukhululekile ukubuza ukuba ufuna iinkcukacha ezingakumbi. Zonke izidlo ziphekwa ngumntu ogcina indlu kunye nentsapho yakhe abapheki abasemagqabini nabahlala kuyo.
I-Toto yakho eqhutywa ngumntu ococa indlu iyafumaneka ukuba ithathwe/yehle, ibuke indawo, njl.njl. itsalelwa imali. Ungumntu wasekuhlaleni ibe uyayazi kakuhle le ndawo ibe ungamncomela ukuba akubonise indawo yakhe.
Indlu iseGoyal Para ejongene neSikolo samaBanga aPhakamileyo. Zonke izinto ezinomtsalane zaseShantiniketan, eBolpur zingaphakathi kwemizuzu eyi-10 umgama. Umlambo iKopai ukufuphi. Luhambo olufutshane oluthandekayo ukuya kwindawo yokujonga. Indlu inobubele kwisilwanyana sasekhaya kwaye umlambo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuthatha inja yakho ukuba uhambe.
Ihlathi laseShonajhuri, iDurga Bari, iSaturday Haat (Intengiso), iArambagh Nursery, iYunivesithi yaseVisva Bharati kunye neRatan Pally zonke zizinto ezinomtsalane ezidumileyo kunye nokukhwela nje okufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Mahua
Iindwendwe zinendlu yazo zodwa. Umgcini wendlu kunye nosapho lwakhe bahlala kanye kwindlu elandelayo kwaye bakhona ngalo lonke ixesha lokukhathalela zonke iimfuno zakho. Bangabapheki abakhulu kwaye ungafumana isidlo ngasinye esilungiselelwe ngabo, kubandakanywa isidlo sakusasa, esihlawulelwayo ngokwahlukeneyo.
Iindwendwe zinendlu yazo zodwa. Umgcini wendlu kunye nosapho lwakhe bahlala kanye kwindlu elandelayo kwaye bakhona ngalo lonke ixesha lokukhathalela zonke iimfuno zakho. Bangabaphe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Goyal Para